श्रीमान्‌लाई छाडेर कुकुरसँग बिहेको फोटो शूट ! - माडी खबर
श्रीमान्‌लाई छाडेर कुकुरसँग बिहेको फोटो शूट !
माडी खबर calendar_today ११ कार्तिक २०७८, 10:34 am
काठमाडौं । बिहेको दिनको युगल तस्वीर सबैका लागि निकै विशेष हुन्छ । बेहुला बेहुलीले एक अर्काको हात समाएर, अँगालो हालेर, बोकेर आदि अनेक बान्कीमा वेडिङ फोटोशूट गराउँदछन् । तर एकजना अमेरिकी बेहुलीले भने आफ्नो पाल्तू कुकुरसँग बिहेको फोटो शूट गराएपछि चर्चा कमाएकी छिन् ।
घरको कुकुरसँग वेडिङ फोटोशूट गराउने ती युवतीको नाम हाना किम हो । हालै किमले आफ्नो पूरानो साथी जेरार्ड ब्रिकम्यानसँग बिहे गरेकी छिन् । तर आफ्नो प्रेमीसँगको बिहे समारोहमा उनले सबैभन्दा पहिलो तस्वीर आफ्नो कुकुरसँग खिचाएर सार्वजनिक गरेकी हुन् ।
स्मरण रहोस् हानाका घरमा अरु दुईवटा कुकुरहरु पनि छन् । हाना र जेरार्डको भेट सन् २०१४ मा तिनै कुकुरहरुकै कारण भएको थियो । त्यसबेला नै उनीहरुले ती विशेष कुकुरहरुलाई आफ्नो बिहेमा सहभागी गराउने बाचा गरेका थिए । एजेन्सीको सहयोगमा
विचित्र संसारबाट थप